Siya echibini ne-Sonos Roam, umngane ongcono kakhulu ngezinsuku zasehlobo [Ukuhlaziya] | Amagajethi Ezindaba
UKarim Hmeidan | 21/06/2022 21:09 | Kubuyekezwe ku- 21/06/2022 21:12 | Izipikha
Yize iqala ngokusemthethweni kuleli sonto, iningi lethu selihlushwa ukushisa kwehlobo, futhi sizoba nehlobo elishisayo njalo. Ngakho-ke, yini engcono kunokucwilisa echibini? futhi yebo, sesivele sazi ukuthi nonke ningamaqhawe ngakho-ke namuhla sikulethela ukuhlaziya okusha I-Sonos iyazulazula, isikhulumi esingcono kakhulu santambama zethu zokubhukuda (ekuseni nasebusuku). Isipikha esinekhwalithi yomsindo enhle ukumelana nayo yonke into (noma cishe). Qhubeka ufunda ukuthi sikutshela yonke imininingwane.
1 Yebo sayicwilisa
2 Idizayini ilungele noma iyiphi indawo, kanye nenkampani...
3 Imibala emisha ephefumulelwe yaseCalifornia
Siphambi kwe- I-Sonos Roam yakudala, lena enomsizi obonakalayo (kukhona inguqulo ye-SL eshibhile ngaphandle kwewizadi), kunjalo iyahambisana ne-Alexa kanye Nomsizi we-Google. Kamuva sizokhuluma ngemibala emisha, kodwa okubaluleke kakhulu ukwenza kucace ukuthi yebo, ungayicwilisa emanzini futhi i-Sonos Roam isazosebenza njengentelezi.
Yebo, uma icwile emanzini iyeka ukukhipha umsindo mhlawumbe ngenxa yamagagasi ebluetooth njengoba ilahlekelwa isignali. Ngaphandle kwalokhu, kusobala ukuthi abaningi benu bazocabanga ukuthi bangayenza kanjani isebenze uma singenayo isignali ye-Wi-Fi? Nokho, njengoba sishilo… Lokhu I-Sonos Roam iyakwazi ukuxhuma kumadivayisi ethu nge-Bluetooth ngaphezu kwe-Wi-Fi, ukuze sikwazi ukuxhuma noma iyiphi i-smartphone noma ngabe siseduze ne-Wi-Fi yendlu yethu. futhi csikhukhukazi siya emaphandleni noma olwandle... (Khumbula ukuthi ekucushweni kokuqala uzodinga uxhumano lwe-Wi-Fi njalo)
Ngokuqondene nokuzimela. inakho Amahora angu-10 wokudlala kwe-Bluetooth ngevolumu evamile, ekhaya nge-Wifi inokuzimela okufanayo futhi, bese ungakwazi ukuyixhuma kunoma iyiphi ipulaki noma ibhethri yangaphandle ngenxa yayo. Imbobo ye-USB-C. Futhi ngasendleleni, iphinde ihambisane namaphedi wokushaja we-Qi.
Idizayini ilungele noma iyiphi indawo, kanye nenkampani...
Ungakubona esithombeni esidlule, simfake kumata ngesikhathi ejabulela ukudla kwasehlobo, ngeke kwenzeke lutho uma simanziswa lezi noma siwela phansi echibini….
Sakuthanda kakhulu lokho engxenyeni engezansi enezingqimba umklamo wenziwa ngenjoloba ukuze ungasheleli, the umklamo ofanayo njengokuthi siwubeke mpo. Yiqiniso, qaphela njengoba ezinye izingxenye zenziwe ngensimbi futhi siyakukholelwa lokho zingaklwejwa kalula futhi le mihuzuko ibonakale. Into esingayithandanga kakhulu njengoba nakuba izama ukulandela ukwakheka kwekhwalithi ye-Sonos ingalimala kalula njengoba iyisipika esiphathwayo.
Phezulu sinezilawuli zokudlala kanye nesilawuli semakrofoni esingakwazi ukuyithulisa noma nini lapho sifuna (lokhu futhi kusebenza njengemakrofoni yokushuna Trueplay kusuka ku-Sonos).
Imibala emisha ephefumulelwe yaseCalifornia
Le Sonos Roam ifika ngesikhathi esingcono kakhulu sokuthi siyijabulele lapho siphuma khona. Imibala emisha ephefumulelwe yaseCalifornia esukela ku-a olive green (inguqulo esiyizamile) esikhumbuza amasimu aseCalifornian, umbala Igagasi (eliluhlaza okwesibhakabhaka) lolwandle lwe-pacificukudlula Ukushona kwelanga, ukushona kwelanga okubomvu kwalokho kushona kwelanga okumangalisayo kweCalifornia.
Imibala emisha ejoyina Okumnyama Nokumhlophe abethule ngaphambilini futhi esesivele sikhona ukuze sibabambe ngaphambi kokuthi sibalekele olwandle.
Iqiniso liwukuthi singangeza okuncane kumkhiqizo we-Sonos, iyasebenza futhi ikwenza njengentelezi. Nakuba kuyiqiniso ukuthi yonke into inokuthuthuka, i I-Sonos Roam ingumngane ophelele wezinsuku zokubhukuda. Akusekho kukhathazeka ngalowo mngane ohlale eziphonsa "ebhomuni" emanzisa yonke into, i-Sonos Roam ngeke ihlupheke.
Kuyiqiniso ukuthi yonke into inenani, Ama-euro angama-199 angenza ezinye izinketho eziningi zibe yigugu, kodwa kungenzeka sibe nesipikha se-Sonos esingasisebenzisa nesistimu ye-Sonos nge-Wifi, futhi ekubalekeni kwethu kude nobuchwepheshe ngenxa ye-Bluetooth bayenza isipikha okumele usikhumbule.
Umsindo, izici, noxhaso lwe-Sonos kwenza le-Sonos Roam, manje esigqoke imibala, esinye sezipikha eziphathwayo okufanele zicatshangelwe. U-€199 ukuze uthole lesi sipikha esiphathekayo esihle ongasithola kuwebhusayithi esemthethweni ye-Sonos noma kubathengisi abakhulu bobuchwepheshe.
Ukubuyekezwa kwe: UKarim Hmeidan
Kuthunyelwe ku: 21 Juni ka-2022
Ukulungiswa kokugcina: 21 Juni ka-2022
Ukuxhumana okungenantambo nakho konke nge-Wi-Fi ne-Bluetooth
Izinto ezingathuthukiswa zibe yi-SUV
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Isithombe nomsindo » Izipikha » Siya echibini ne-Sonos Roam, umngane ongcono kakhulu ngezinsuku zasehlobo [Ukuhlaziya]
I-Carpuride ikulethela i-Android Auto ne-CarPlay emotweni yakho endala